Tsvuku Cardinal Bhaibheri RinorevaChiratidzo, kutenda & pamweya - Zvinoreva Zvemubhaibheri
iphone yakavhurwa asi hapana sevhisi
iphone 6s nhema skrini mushure mekutsiviwa kwechidzitiro
ndinogona kugadzirisa yangu iphone 6 skrini
kuchenesa sei sirivheri
Kadhinari Shiri Chiratidzo muChiKristu
Zvinoreva zve red red. Shiri, kunyanya njiva, dzakagara dziri mucherechedzo wemweya mutsvene . Kupa kwemweya mutsvene kunowanzo kuve nechimwe chezvinhu zviviri, chena mwenje kana mutsvuku murazvo. Njiva chena inomiririra kuchena nerunyararo muchiedza chemweya uye uyo akatsvuka kadhi anomiririra moto uye simba remweya mupenyu .
Pamusoro pezvo, kadhinari anomiririra ropa mupenyu raKristu.
Makadhi matsvuku . Ose makadinari neropa zvakagara zviri zviratidzo zvehunhu, uye mumamiriro echiKristu, simba iro rinogara nekusingaperi. Neropa rake takasunungurwa kubva kuzvivi kuti tishumire Mwari mupenyu, kumukudza, nekumufarira zvachose . Pachivanhu, Kadhinari anofananidzira hupenyu, tariro uye kudzoreredzwa.
Izvi zviratidzo zvinobatanidza makadhinari shiri kune kutenda kurarama , uye saka vanouya kuzotiyeuchidza, kuti kunyangwe mamiriro ezvinhu angaratidzika seasina tariro, akasviba uye asina tariro, pane tariro nguva dzose.
Mukardinali mufananidzo wekutenda kwechiKristu ndiJesu Kristu . Kunze kweshiri chaiyo yemapapiro matsvuku-mapapiro anomiririra kutenda muropa mhenyu raKristu, kune mamwe mana anofadza zvikuru makadhinari akadzika midzi mumavambo ezwi rekuti 'kadhinari'. Aya makadinali zvinhu zvine chekuita naKristu zvese nhoroondo uye zvinomiririra.
Pazasi pauri uchaona kuti pane mazwi mana akakosha anobva mushanduro yemidzi yezwi kadhinari.
Vari: kiyi, hinji, moyo uye muchinjiko. Aya mana makadhinari maficha sezvaanoenderana netsika dzechiKristu anogona kuzarurira mimwe mifungo mitsva kwauri pamusoro pekutenda, Kristu uye makadhinari.
Makadhinari shiri zvinoreva
Shiri, semuenzaniso, dzinozadzwa nechiratidzo chakakura. Izvo zvipuka zvine hunyanzvi izvo zvinotiunzira meseji dzakakosha uye kuti kana tikadzidza kuzvichengeta zvakaringana, tinozozvinzwa kuburikidza nekurova kwavo.
Makadhinari ndeimwe yeshiri dzinokatyamadza kune avo mutsvuku. Inotidzidzisa nezve zvakavanzika zvakawanda muhupenyu, kubva mukuwana simba rekuenderera mberi, kuyanana zvakare nevatinoda vedu vakashaya.
Sezvakaita hummingbird, makadhinari vanofungidzirwa kunge vakakomberedzwa nekunamata kwemazana emakore. Vakuru vepamusoro vechiKatorike vanonzi makadhinari uye vanopfeka nguvo tsvuku. Tsika dzevaNative America dzinotenda kuti makadhinari mwanasikana wezuva uye kana iwe ukaona kadhinari achibhururuka kumusoro, iwe uchave nerombo rakanaka.
Ukasangana necardinal iyo zvinogona kunge zviri nekuti urikupokana nesimba rako uye ichi chiyeuchidzo chekuwanazve chivimbo uye fambira mberi zvisinei nezvipingaidzo munzira.
Imwe yekutenda ndeyekuti makadhinari vatumwa pamweya. Vanhu vazhinji vakataura vachiona makadhinari kakawanda mushure mekufirwa nemudiwa. Makadhinari anogona kutumirwa kukuzivisa iwe kuti mudiwa wako achiri newe.
Kune zvikonzero zvakawanda nei vanhu vachidaidza kadhinari mhuka yemasimba. Avo vanotamira kumusha mutsva kana vanochinja mabasa tsvaga makadhinari gwara rakanakisa rekupfuura. Dziviriro yeshiri iyi inopa vanhu simba kuchengetedza nharaunda yavo zvakaringana.
Icho chikadinari chiratidzo chinonyanya kukonzerwa neruvara rwakatsvuka, rwiyo rwayo rwakatsetseka asi rwune mutsindo, uye hunhu hwayo hwakasiyana. Iyi nhengo yemhuri yekupedzisira inomiririra zvinhu zvakawanda, kubva pakudanana kwezve rudo kusvika kuhutungamiriri hunotyisa. Iye anoimba kune mumwe wake panguva yakaoma yemamiriro ekunze, rwiyo rwakawanda varindi veshiri vanorondedzera se rwiyo rune simba uye rune rudo.
Icho chiratidzo cheiyi shiri zvakare ine kukosha kukuru uye kuremekedza, kunyanya mu Tsika dzechiKristu. Iko kubatana uye kusiana uko kunotiyeuchidza nezvedu divi revanhu.
Kana kadhiinari ikaonekwa muzviroto zvedu , tinogona kunzwa kuti tiri kusunungurwa kubva pakurema kukuru. Ndokusaka tsika dzekare nedzinyakare dzaitora shiri idzi sezvisikwa zviri padyo nedenga.
Chiratidzo cheRED CARDINAL
Pane zvakakosha here pakuona a red cardinal ? Shamwari yangu Chris paaitenda kuna Mwari nechishamiso chekuporesa imbwa yake Allie, aigara achiona shiri iyi yakasarudzika sezvaaipedza kufamba kwake kwekurovedza muviri. Izvo hazvina basa kuti aive kupi - munzira iri pedyo yeLake Pine kana kumashure kumba kwake, akatendeka akaona shiri iyi yakanaka.
Chris akandiudza kuti aitarisira kuuya kumba kungoona kana aizoona shiri iyi. Neimwe nzira yakamupa simbiso yeropa raJesu rakadeurwa kwatiri tese. Neimwe nzira zvakamunyaradza kuziva kuti Mwari akanzwa minamato yavo kune imbwa yavo yairwara.
Munguva pfupi yapfuura mwanakomana wake Eric akamuudza kuti akaonawo zviratidzo zvemakadhiinari matsvuku panguva iyoyo yekumirira chishamiso chaAllie chekuporesa. Mwari angadai akashandisa chiratidzo ichi kukurudzira kutenda kwavo?
Sei tichifunga kuti zvinoshamisa kuti Mwari vachataura vachishandisa zviratidzo zvenyama? MuBhaibheri rose , Mwari vakashandisa zviratidzo nezvishamiso kusimbisa izwi ravo. Asi izvo, pakafa Jesu pamuchinjikwa, paive nezvakaitika zvisingawanzoitika zvakaitika. Kwakave nerima pamusoro penyika yese kwemaawa matatu ( Mako 15:33 ).
Vheiri retembere rakabvaruka kuita mapandi maviri, kubva kumusoro kusvikira pasi. ( Mateu 27:51 ). Inototaura kuti mushure mekumuka kwake makuva akamutswa uye mitumbi mizhinji yevatsvene vakange vakarara vakamutswa. ( Mat 27: 52-53 ). Izvi zvaive zvikwangwani zvakakura, asi sei vazhinji vakavashaya?
Zvaive nekuti vanhu vaisatarisisa nekuteerera? Handimbofi ndakakanganwa chimwe chekuona kwangu. Rimwe zuva ndakatarisa 2 akanaka mapuruguru echirongo pamusuwo wekumashure wemba yangu kweinenge 1 awa. Zvaitaridza kushamisa, asi ndakamira ndakashamiswa uye ndakanamata. Ndakanzwa Ishe vachitaura vimbiso yavo yekuporeswa kwandiri semapururufuru zvinomiririra rusununguko.
Pandakazovhura musuwo wekumashure, vakabhururuka ndichienda ndichiisa chiitiko chikuru mumoyo mangu. Nepo iwe uchigona kufunga izvi zvinoshamisa, iyi shamwari yangu, inofanira kunge iri tsika.
Ndinotenda Mwari anoda kutaura nevanhu vake achishandisa ese marudzi enzira dzekugadzira - kunyangwe kushandisa echisikirwo zviratidzo uye zviratidzo. Muchokwadi, isu naChris tiri kutenda kuti iwewo unogona kuita kuti Mwari ataure newe kuburikidza nechiratidzo. Pamwe chichava chiitiko chitsvuku? Kana pamwe kwete? Asi chero zvazvingava - chichava chimwe chinhu chako pachako.
Kuona kadhiinari tsvuku mushure mekufa
Pfungwa yekuti makadhinari inhume dzomweya dziripo mutsika nezvitendero zvakawanda. Nekuda kweizvozvo, zvinhu zvakawanda zvine zita rekuti kadhinari. Zvinosanganisira makadhinari mavara, makadhinari mafambiro, uye makadinali ngirozi. Kadhiinadhi zita rinoreva kukosha.
Izwi cardinal rinobva pashoko rechiLatin rukato , zvichireva hinge kana axis. Kunge hinji yemusuwo, mukadhinari ndiyo hinji pamusuwo uri pakati pePasi neMweya. Vanotakura mameseji kumashure uye mberi.
Ngano zhinji netsika dzakakomberedza kadhiinari zvine chekuita nekuvandudzwa, hutano hwakanaka, hukama hunofadza, mukadzi mumwe, uye kuchengetedzwa. Tichitarisa kuhupenyu hwemakadhinari, zviri nyore kuona kuti nei iine hukama hwakanaka. Semuenzaniso, makadhinari anowanana kweupenyu hwese. Zvakare, idzo dzisiri shiri dzinofamba-famba saka dzinogara munzvimbo yavo yepedyo hupenyu hwavo hwese, vachidzivirira turf yavo. Uye mushure mekunge vaviri vacho vasununguka, vabereki vese vanoshanda pamwechete kuvimbisa hutano, hutano, uye chengetedzo yemhuri yavo.
Kana iwe uchidavira kuti makadhinari vatumwa vanobva kuMweya, uye nguva inotevera paunoona uyo ari kuomerera kuti utaridzike, zvibvunze mibvunzo iyi: Chii kana ndiani wawanga uchifunga panguva iyoyo? Wakakumbira nhungamiro kuMweya here kana kukumbira rubatsiro kuti uwane mhinduro kumubvunzo wakakosha? Bvumira ako makadinali kuona kuti ukuunze iwe kunzwa kwerunyararo.
Ziva kuti Mweya unoteerera. Rega kutsvuka kwemakadhi makadhi kukuyeuchidze kuti Mweya anogara achikutungamira uye anokuchengetedza. Pamusoro pazvose, usakanganwa kutenda shamwari dzako dzemakadhinari neMweya nekutungamira kwavo.
Zvinorevei kana Mwari vachitumira makadhinari?.
Shoko raMwari rakapihwa munhu kuti aratidze nzira yeruponeso. Izvo hazvina kuitirwa kuve bhuku rezvakasikwa. Nekudaro, mukati maro mune hwakawanda hwereferenzi kune zvakasikwa, mazhinji acho akashandiswa kujekesa chokwadi chemweya. Shiri dzeBhaibheri dzoga dzinopa chinyorwa chinonakidza chekudzidza.
Kune ndima dzinosvika mazana matatu muBhaibheri dzinotaura shiri. Vanopfuura zana veava vanongoshandisa izwi shiri kana shiri, kusiya muverengi achifungidzira pamarudzi. Zvinonakidza kucherechedza kuti vanyori veTestamente Yekare vaiziva zvakawanda nezveshiri, uye sezviri pachena vaifarira shiri kupfuura zvaiita vanyori veTestamente Itsva. Paul, semuenzaniso, anoreva shiri kaviri chete mutsamba dzake dzese.
Shiri hadziwanzo kuvhiringidzika nedzimwe nhengo dzemhuka nekuda kwehunhu hunoonekwa - mapapiro neminhenga. Sezvo ivo vane aya akakurumbira maficha, munhu anogona kuona zviri nyore kuti vamwe vevanyori veBhaibheri vaifunga nezveshiri pavaishandisa mazwi akadai sekubhururuka, mapapiro, uye minhenga.
Zvakakodzera sei kuti Bhaibheri rinoshandisa shiri kudzidzisa zvidzidzo zvemweya. Kune mumwe anotambudzwa nematambudziko ehupenyu huno kunouya ndima. Ndinovimba naJehovha; munoreva seiko kumweya wangu, muchiti, Tizira kugomo rako seshiri? (Pis. 11: 1). Kune uyo anzvenga hunyengeri hwaSatani ndiwo rugwaro, Mweya wedu wapukunyuka seshiri kubva mumusungo (Mapisarema. 124: 7).
Kune uyo ari kunetseka nekuda kwedambudziko zvakanyorwa, Seshiri pakubhururuka kwayo, kana nyenganyenga pakubhururuka kwayo, chituko chisina musoro hachiendi (Zvir. 26: 2. R.S.V.). Kune avo vasinganzwisise nei vasingatendi vachikwidziridzwa chiporofita chinopihwa, Kubwinya kwavo kuchabhururuka seshiri (Hosea 9:11).
Kune murume akazadzwa nekuzvinzwira tsitsi nekuti haana kuropafadzwa nehupenyu hwese hwamazuvano, Jesu anoti, Shiri dzedenga dzine matendere; … Asi Mwanakomana wemunhu haana pekuisa musoro wake (Mat. 8:20).
Shiri yaidikanwa muIsrael yekare inoita kunge yaive njiva. Izvi zviri nyore kunzwisisa, nekuti njiva yedombo yePalestine yaive yakawanda. Yakavakirwa mumakomba emawere aidzivirira mipata inofadza.
Iyi shiri yakapfava uye yakanaka yaive nerudo rwakafanana nenjiva yayo uye kuvimbika kumwe kune imwe yayo sezvakaita njiva dzedu dzinochema nhasi. Ndosaka zvakataurwa nezverudo muMapisarema seizvi: Mapapiro enjiva akafukidzwa nesirivha, minhenga yayo nendarama yero (Pis. 68:13).
Njiva yakasunungurwa naNowa kuti ione kuti mvura yemafashama yakanga yadzikira zvakadii. Chaishandiswa semucherechedzo weMweya Mutsvene parubhabhatidzo rwaJesu. Avo vaive varombo vaigona kushandisa njiva pachinzvimbo chegwaiana sechibayiro.
Kunyangwe zvaMaria naJosefa, vabereki vaJesu, zvinonzi: Zvino nguva yekunatswa kwavo payakasvika zvichienderana nemutemo waMosesi, vakauya naye kuJerusarema kuti vamuise pamberi paIshe. . . uye kuti ubayire chibayiro. . . , ‘Hangaiwa mbiri, kana hangaiwa mbiri diki’ (Ruka 2: 22-24, R.S.V.).
Njiva yakanga iri mucherechedzo wavanarabhi kuvaIsraeri serudzi. - SDA Bible Dictionary, p. 278. Chokwadi ichi chinopa kukosha kwakakosha mundima iyi, Naizvozvo, ivai vakachenjera senyoka uye musingakuvadzi senjiva (Mat. 10:16). Zvaiita sekunge kuti, Iva nehungwaru, chenjera, chenjera, asi mune izvi zvese, rangarira iwe uri maJuda. Chengetedza kusava nemhosva, hunyoro, uye nekukuvadza kwenjiva icho chave chiri chiratidzo chako chakavanzika.
Achishandisa mucherechedzo mumwe chete wakakodzera, muporofita Isaya akange ane zviratidzo zveVamarudzi vaiuya muzvizhinji kuzonamata Mwari wemaJuda; uye naivowo vaizove nehunhu hwakafanana hwekukosha kwenjiva: Ndivanaani ava vanobhururuka segore, senjiva dzinoenda kumahwindo adzo? (Isa. 60: 8).
Gondo nemapapiro aro ane simba, nzara dzaro dzinotyisa, muromo wayo wakapinza wakakombama, uye hunhu hwayo hwekudyira hwaishandiswa kazhinji muTestamente Yekare kukurudzira nekusimudzira mauto eIsraeri. Murenje risina nzira, uko kwavakatadza kuvimba nekuchengetwa kwaMwari nekutongwa uye nekuteerera mitemo Yake, Akavaratidza saizvozvo: Makaona zvandakaitira vaIjipita, uye kuti ndakakutakurai sei pamapapiro egondo, ndikakuunzai. iwe kwandiri.
Zvino, zvino kana mukateerera izwi rangu zvechokwadi, mukachengeta sungano yangu, ipapo muchave fuma chaiyo kwandiri pamusoro pevanhu vose (Eks. 19: 4, 5).
VaIsraeri vaiziva zvaitaurwa naMwari. Vakanga vari mumasango eArabia. Iyi yaive nyika yegondo. Mazuva ese vaiona shiri dzemusango dzinoyevedza dzichikwira pamusoro pemupata wemisasa yavo. Chidzidzo chacho chaive chepuraimari uye chisina kujeka. Ivo, vanhu vake, vaizokwira pamusoro pematambudziko avo. Mukuchengeteka kwesimba Rake vaiseka kuseka kwedutu rairova pamusoro pavo- kana vakachengeta chibvumirano Chake. Ndosaka vakapindura neZvose zvakataurwa naIshe isu tichazviita (Eks. 19: 8)!
Munguva yechizvarwa chaDavid kuchengetwa kwaMwari nekuchengetedzwa kwenyasha kwakataurwa nemunyori wepisarema pachake, achishandisa mucherechedzo mumwe chete: Achakufukidza neminhenga yake, uye uchavimba pasi pemapapiro ake (Mapisarema 91: 4). Uye pamwe kufungidzira kutsva kwesimba kuchikamu chegondo, pamwe mushure mekunyungudika, David anonyorazve nezve maropafadzo aMwari: uyo anogutsa muromo wako nezvinhu zvakanaka; saka kuti hudiki hwako hunovandudzwa segondo (Mapisarema 103: 5).
Zvainzwisiswa neIsrael kuti Mwari vangangoda kubvumidza miedzo kuvadzivirira kubva mukugadzikana, asi mumiedzo iyi Aisazovasiya. Segondo rinomutsa vana varo, Richiengerera pamusoro pavana varo, Rinotambanudza mapapiro aro,. . . Anovatakura pamapapiro ake, saka ndiIshe chete akamutungamira (Deut. 32: 11, 12).
Dzimwe nguva Mwari vanobvuma vasingade kumanikidza vanhu vavo. Saka paive panguva yaakapa Israeri zvihuta zvekudya murenje. Kunyangwe hazvo Mwari sezviri pachena akaronga kudya kwemavheji kuIsrael, vaive vagara kwenguva refu pakati pemidziyo yenyama yeEgypt zvekuti vaive vasina kugutsikana nechikafu chakapihwa, kunyangwe imwe yacho yaive mana yekudenga kunyanya uye inopiwa nenzira inoshamisa.
Moses, neimwe nzira yekutsungirira neanogunun'una, akati kwavari, Musatya, mirai muone ruponeso rwaIshe, rwaachakuratidza nhasi (Ex. 14:13). Kutenda kwake kwakapfuura mubairo kwakakomborerwa muchiitiko chinoshamisa chezvihuta zvinowira pamusasa zvakawandisa zvekuti vaisakwanisa kuzvishandisa zvese. Nezuva iroro Mwari akanayisa nyama pavari seguruva, neshiri dzine minhenga sejecha regungwa (Mapisarema 78:27).
Izvo zvinofungidzirwa nevazhinji kuti Mwari akashandisa zvakasikwa mamiriro, sezvaAkaita pane dzimwe nguva, kuunza izvi. Yakanga iri nguva yegore apo zvihuta izvi zvaifamba, uye yaive tsika kune mapoka makuru kupfuura chikamu cheMediterranean kana Gungwa Dzvuku. Urwu rwendo rurefu uye runonetesa shiri dzine miviri inorema uye mapapiro madiki, uye mazhinji acho akange aneta paakasvika pasi, uye akabatwa nyore. Chero zvazvingava, dzinowanzobhururuka padhuze nepasi uye dzinogona kubatwa nemambure.
Chiitiko chechisikigo kana kwete, Ishe vakaona kuti iro boka raive rakakura kupfuura zvakajairwa; vakamhara zvine mutsindo munzvimbo kwayo. uye nguva yacho yaishamisa. Mune nzara yavo chero nyama yaizogutsa chishuwo chavo chakamonyoroka, asi Mwari mumutsa wake wekugutsikana akavapa kunaka kwehuta zvihuta.
Rondedzero refu kwazvo yeshiri mune chero chitsauko chimwe cheBhaibheri inowanikwa munaRevhitiko 11 (yakafanana yakafanana iri munaDhuteronomi 14). Rondedzero iyi inoumbwa neshiri dzisina kuchena. Hatizive zvikonzero zvese nei Mwari akabvumidza dzimwe shiri nemhuka kudyiwa uye kurambidza dzimwe, asi isu tinoziva kuti runyorwa urwu runosanganisira shiri dzinoverengeka dzinodya. Vamwe vanyori vanofunga kuti tsika inoera yekuteura ropa yaibatanidzwa. Israyeri yaisatenderwa kushandisa ropa sechikafu, uye sezviri pachena havafanirwe kudya shiri dzinodya nyama idzo dzakadya zvikamu zvese zvezvavaibata kusanganisira ropa.
Vashanduri vanosiyana maererano nemazita echiChirungu eshiri idzi dzisina kuchena, asi tinenge takarurama kutaura kuti runyorwa urwu rwunosanganisira anotevera: Magora, makondo, kiti, magora, magora, makunguo, mapfumo, zizi, makondo, mapira, shuramurove, mhou, nemakwenzi, zvese izvi zvinodya nyama, kana zvinokambaira.
Zvinoshamisa kutaura, runyorwa rwunosanganisirawo chiremwaremwa, iyo isiri shiri zvachose. Mumazuva iwayo, pasati paitwa masainzi ezvesayenzi ezvinyorwa, vana veIsrael vangadai vangadai vasina kunzwisisa kana chiremwaremwa chisina kubatanidzwa. Inobhururuka, handizvo here?
Rondedzero iripamusoro ine shiri dzine hukuru hwakawanda, kubva ku griffon gora rine mapapiro ekupararira kwemamita masere kusvika kune madiki masere-masere scops owl. Vamwe ndevanoenda, vakaita segondo, gora, gora, uye gora; dzimwe dzinongova shiri dzemvura, semhashu, chipembere, uye chinokambaira; uye dzimwe dzaive husiku, sezizi.
Raiva gunguo rakashandiswa naMwari kuunza chikafu kuna Eria. Idzi ndidzo shiri dzinotyisa, dzisina kuchena dzinoratidzika sedzinogara dzine nzara nguva dzose; uye zvakadaro vakachengeta muprofita ari mupenyu panguva yenzara paakahwanda kuhasha dzaAhabhi. Pasina rudo kana kwete, makunguo ari pasi pekutarisira kwaMwari. Anovapa ivo nevechidiki (Jobho 38:41), uye akavashandisa nenzira inoshamisa kupa mumwe wevaranda vake.
Jesu akashandisa shiri duku kusimbisa chimwe chezvidzidzo zvake zvakakosha-zvekuchengeta kwake munhu mumwe nemumwe. Pano izwi rekuti shiri duku rinofanira kunge raireva imwe yeshiri diki, dzisina ruvara dzakafanana nerudzi rwedu rweshiri, nekuti zvaive nemutengo mushoma wekutengeserana kana wekuda. Shiri duku mbiri hadzitengeswi nekobiri here? (Mat. 10:29). Jesu anoti, Musatya vanouraya muviri. . . . Nebvudzi chairo remusoro wako rakaverengwa rese.
Naizvozvo musatya, imi munokosha kupfuura shiri duku zhinji (Mat. 10: 28-31). Kunyanya munguva dzino dzinonetsa zvinokurudzira kuziva kuti Mwari uyo anocherekedza kunyange shiri duku iri kudonha ane rudo rwakanyanya kusimba kumunhu mumwe nemumwe. Iye ane hanya newe; Anondida. Ngatiisei kuvimba kwedu maari, tichiziva kuti takachengetedzwa pasi pemapapiro Ake.
ZVIREVO ZVEBHAIBHERI ZVOKUONA KUTI HAWK
Jared Biblical Mufananidzo - Zvinorevei Jared?